Ny rano dia azo aseho amin'ny kisoa amin'ny alàlan'ny nipple, lovia na rano fisotro.
FANOMPOAN'NY RANO AMIN'NY kisoa Izahay dia amin'io fotoana io amin'ny taona izay mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny kisoa noho ny toetr'andro mafana. Vao mainka hiharatsy ireo fiantraikany ireo raha toa ka voafetra ny rano. Ity lahatsoratra ity dia manana fampahalalana mahasoa ary lisitry ny 'must dos' hahazoana antoka ny habetsahana sy ny kalitaon'ny wa ...
Ahoana no fomba hanondrahana rano ho an'ny akoho amam-borona
Fitaovana ilainao ilainao: 1 - Vondron-trondro akoho amam-borona 2 - 40 Fandaharam-potoana 40 PVC (Halava ho faritana amin'ny isan'ny nipples) 3 - ¾ Inch PVC Cap 4 - adaptatera PVC (3/4 Inch mipetaka amin'ny pipe Inch fantsona kofehy) 5 - Brass Swivel GHT Fitting 6 - Rubber tape 7 - PVC Cement 8 - 3/8 Inch Drill Bit 9– PV ...
Ahoana ny fomba fiompiana sy famahanana ny broiler, akoho na gana
Ny dingana voalohany dia ny hahazoana antoka fa ny akohovavy tsirairay dia manana faritra mafana, maina, arovana na boaty akanim-borona hanatodizany ny atodiny. Tokony ho eo akaiky na amin'ny tany io mba hahafahan'ny zana-borona miditra sy mivoaka soa aman-tsara. Mametraha ahitra ao anaty boaty ho an'ny akany mba hihazonana ny atody ho madio sy hafana ary hisorohana ny vaky. Ny hen ...
Ny tavy fihinanam-bilona mandeha ho azy dia manatsara ny fahasalamana voafafa sy ny fahasarotan'ny kisoa
Isan'andro ianao dia mivezivezy amin'ny fanamby amin'ny fiompiana kisoa - manao asa bebe kokoa amin'ny asa toa tsy dia miasa loatra, mandritra ny fiezahana manatsara ny fahombiazan'ny kisoa. Ny fahazoana tombony dia mitaky fahombiazanao, ary manomboka amin'ny fifehezana ny fihinanana fihinam-bary mampinono. Ireto misy antony efatra hifehezana ny s ...